Itoobiyaa..Yaa Is dagaalaya Yaana Lala Dagaalayaa? | Xaqiiqonews
Itoobiyaa..Yaa Is dagaalaya Yaana Lala Dagaalayaa?
Muddo sanad ah waxa aan maqleynaa wararka dagaalka Itoobiya ka socda, laakiin marka aan si fiican u fiiriyey baraha bulshada Soomaalida waxa aan ogaaday in xitaa dadkeenu aysan ogeyn su’aalaha asaasiga ah ee dagaalka halkaas ka socda: yaa is dagaalaya..yaase lala dagaalamayaa?
lama yaabani in shacabka intooda badan aysan fahamsaneen u jeedada dagaalka, sababtoo ah waxa aan ogahay isha wararka dadkeena oo ah warbaahinta Soomaaliya oo indha ay u yihiin BBC-da iyo Voa-da oo iyagu dagaalka qeyb ka ah.
Intiina aan garaneyn.. dagaalka Itoobiya ma ahan mid cusub, laakiin waxa aan hadda arkeynaa waa kaliya bog cusub oo u furmay dagaalka qowmiyadaha saldhigga u ah ee ka aloosanaa halkaasi inta la ogyahay taariikhda casriga ah ee Itoobiya.
60-kii Sano ee Ugu Dambeysay
Sanadkii 1964-kii Imabaraatooriyaddii Itoobiya oo markaasi ay xoog ku hogaaminaayeen amxaarada ayaa waxaa soo food saaray cabsi ka dib markii ay ka war heleen in dowladdii Soomaaliya ee ay heshiis Milatari la gashay Midowgii Soofiyeeti, arintaasi oo keentay in uu qarxo dagaal kooban ilaa markii dambe labada dhinac ay heshiis xabad joojin ah ku kala saxiixdaan Kahrtuum Suudaan.
Bartamihii 1970-kii koox yar oo ka soo jeeda Qowmiyadda laga tirada badan yahay ee Tigreey ayaa ka dhiidhiyey xukunkii Amxraada iyaga oo waqtigaasi asaasay jabhadda iska caabinta ee Tigrey (TPLF).
Xukunka Amxaarada ayaa cadaadis xoogan kala kulmaayey dhinca bariga, dhankaasi oo Soomaali Galbeed ay isku dayeysay in ay iska dulqaato xukunka Amxaariga ah waxaana taageera hiil iyo hoo la garab taagnaa dowladdii Soomaaliyeed ee xiligaasi Muqdisho maamuleysay.
Halka dhanka waqooyigana uu socday kacdoon ay wadeen Tigreyga, kaasi oo sanadkii 1991-kii ku soo dhammaaday in Tigreyga xoog kula wareegaan xukunka.
1998-kii , qaar ka mid ah shucuubtii waqooyi ee Itoobiya oo ka koobnaa qomiyado isku dhaf oo ay Tigrey ugu horeysa ayaa ku bilaabay dagaal madax banaani doon ah, iyaga oo sanadkiii 2000 si rasmi ah uga go’ay Itoobiya iteeda kale.
Burburkii Xukunkii Amxaariga ahaa ma noqon mid ay ku daboobaan shucuubtii dulmaneyd ee Itoobiya, waxaana dalku uu mar kale cagaha la galay gumeysiga qowmiga ilaa sanadkii 2012-ka kolkaasi oo cudurka kansarka u dhintay Malez Zenaawi oo dalka xoog ku maamulaayey